Kuelap, Tanàna Mimanda Teo Aloha Kendrena Ho Toeram-Pizahantany Faharoa Lehibe Indrindra Ao Però · Global Voices teny Malagasy
Kuelap, Tanàna Mimanda Teo Aloha Kendrena Ho Toeram-Pizahantany Faharoa Lehibe Indrindra Ao Però
Voadika ny 07 Febroary 2016 6:40 GMT
Vakio amin'ny teny English, Română , Nederlands, 日本語, Ελληνικά, Español
Faran'ny lalana, Kuelap. Sary ao amin'ny Flickr avy amin'ny mpisera Luis Cordova (CC BY-NC-ND 2.0).
Kuelap dia toerana arkeôlôjika Peroviana lehibe miorina ao amin'ny faritanin'i Luya, ao amin'ny faritra Amazonas, natsangan'ny mponina Andeana avy amin'ny kolontsaina Chachapoya [Mpiady avy amin'ny rahona] 1000 taona lasa izay. Mety ho tsy malaza eratany tahaka an'i Machu Picchu, ilay tanàna manaka-danitra naorin'ny Incas tao Però izany, saingy eo am-piezahana ny hanovana izany ny manampahefana Peroviana.
Kuelap, izay tahaka ny tanàna voahodidina rindrina, dia manana ireto zava-misongadina manaraka ireto ao aminy araka ny lazain'ny vondrom-pitetezantany Tambopata :
Toerana midadasika manana maritrano sy maritanàna vita amin'ny vato, miorina an-tampon-tendrombohitra 3000 metatra ambonin'ny haavon'ny ranomasina. Araka ny fanombanana sasantsasany, dia naorina manodidina ny taona 1000 amin'izao vaninandro ankehitriny izao io toerana io, raha tao anatin'ny famirapiratany indrindra ny kolontsaina Chachapoya.
Amin'ny fiteny teratany dia midika hoe “toerana mangatsiaka” ny Kuelap, entina ilazana fa na dia miorina ao anatin'ny alabe peroviana aza izy, dia antonontonony ny toetrandro, maina mandritra ny andro ary tena ambany ny maripana amin'ny alina.
Hitan'i Juan Crisóstomo Nieto, mpitsara iray avy amin'ny Chachapoyas indray ity toerana arkeôlôjika lehibe ity tamin'ny 31 Janoary 1843. Raha nitarika asa mifandraika amin'ny toerany izy, dia tonga amin'ny toerana iray tsy fantatra — noho ny fitoerany tao anatin'ny toerana rakotra ala sy manorana ary sarotra idirana — noho ny fanampian'ny mpitari-dalana sasantsasany.
Mbola feno misitery i Kuelap :
Nandao an'i Kuelap talohan'ny fahatongavan'ny Espaniola ny mponina teo aloha tao Kuelap, noho ny antony izay mbola tsy fantatra hatramin'izao. Ilay Italiana mpikaroka Antonio Raimondi, ny voalohany nanao fanadihadiana ny faritra tamin'ny 1860, dia nahita taolandava sy fohy an-dehilahy mirefy roa metatra [6'5″] ary karandoha ahitana volon'olona miloko mavo, izay niteraka misitery tsy mety voavaha hatramin'ny masonandro androany.
Tamin'ny fotoan'androny dia nampiasa vatosokay ny mponin'i Kuelap hananganana ny fanorenana; ny maritrano manintona indrindra dia ahitana an'i Torreón (tilikambo mimanda), ny Castillo (manda-trano) ary ny Tintero (fitoeran-dranomainty). Ity farany ity, araka ny fanamarihan'ny mpandinika tantaran-toerana, dia heverina ho nampiasaina ijerena ny kintana sy heverina ho toerana fanatanterahana fombafomba izy ny toerana tokana miendrika tsokiloha.
Manana toeram-panintonana maro i Kuelap, araka ny hita amin'ny lisitra fohy avy amin'ny sampandraharahan'ny fiteteza-tany Aracari ity:
Petroglyph in Kuelap. Image on Flickr by user Jorge Gobbi (CC BY 2.0).
Ho azonao jerena akaiky ny vatampaty Revash sy ny soritra menan'ny solika sy ny an'ny Karajía izay mitovy bika amin'ny tsangambaton'ny Nosin'i Paska (Chile) ary ho hitanao ihany koa ireo faritra efa mihasimba ao La Congona, La Joya ary Macro. Toerana iray tsy azo adinoina ny Mozean'i Leymebamba, izay mitazona ireo faty maina voatahiry rehetra hita manodidina ny Farihin'ny Condors.
Tian'ny manampahefana Peroviana ny hanova an'i Kuelap ho toeram-pizahantany faharoa lehibe indrindra ao amin'ny firenena ary ao an-tsaina ny hanorenana fiaran-dalamby mihantona amin'ny tariby vaventy mbola tsy naorina hatramin'izay tao Però. Ny drafitra dia tsy maintsy vitaina alohan'ny Jolay 2016, araka ny tatitra avy amin'ny gazety El Comercio:
[…] ao amin'ny distrikan'i Tingo María (Luya, Amazonas). Hitondra anao ao anatin'ny 20 minitra monja ny dia mahafinaritra sy milamina izay ahafahanao mankafy ny hamaitson'ny tendrombohitra sy ny hafenoan'ny ala hidiranao ao amin'ny mandan'i Kuelap.
Ny tanjona faratampony amin'izany dia ny hitaterana olona hatramin'ny arivo isan'ora.
Namoaka ny zavatra hitany, ny heviny ary sary tamin'ny nitsidihany an'i Kuelap ny mpiserafera Twitter:
Ny mandan'i Kuelap dia miorina ao amin'ny faritra Amazôna eo an-tampon'ny havoanan'i Barreta any amin'ny 3000 metatra ambonin'ny haavon'ny ranomasina
31 Janoary 1843, nahitana an'i Kuelap…
Kuelap, ilay manda mahatalanjona ao amin'ny faha-171 taona nahitana azy.
Namoaka sary 106 tao amin'ny Facebook ao amin'ny rakitsary “MANDAN'I KUELAP – Faritanin'i Luya – CHACHAPOYAS”.